Shir madaxeedka G20 oo loogaga hadlayo la dagaalanka IS iyo wax u qabashada qaxootiga – STAR FM SOMALIA
Shir madaxeedka G20 oo loogaga hadlayo la dagaalanka IS iyo wax u qabashada qaxootiga
Hogaamiyaasha 20ka dal ee caalamka ugu qanisan ayaa ku kulmaya magaalada Antalya ee dalka Turkiga iyadoo si aad ah ammaankeeda loo sugay, arrimaha qaxootiga ay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee shirka horyaal.
War murtiyeed aan rasmi ahayn ayaa hogaamiyaasha ay isku raaceen in mashaakilka ugu weyn dunida haysta kan ugu weyn inuu yahay qaxootiga taasoo ah in si wadajir ah wax loogaga qabto.
Sida ay daabacday wakaalada wararka ee Reuters warmurtiyeedka ayaa lagu xusay in wax ka qabashada arrimaha qaxootiga ay tahay in tallaabo muhiim ah laga qaato iyadoo loo marayo in dib u dejin loo sameeyo qaxootiga,in qaabab kala duwan loo wajaho qaxootiga sida in gargaar bani’aadanimo la siiyo lana xaqiijiyo in qaxootigu ay heli karaan adeegyada ay ka mid yihiin waxbarashada iyo fursadaha kale ee nolosha.
Kulankan ayaa waxa uu dhacayaa iyadoo dunida oo dhan laga hadal hayo weerarkii ka dhacay Paris kaasoo ay sheegteen ururka IS ee maamula qeybo ka mid ah Ciraq iyo Siiriya kuna dhinteen illaa iyo 129 ruux halka ay 350 kalana ku dhaawacmeen iyadoo 99 kamid ah xaaladoodu ay halis tahay.
Iyadoo kulamada G20 ay yeeshaan loogaga bartay in arrimaha dhaqaalaha uu xoogga saaro ayaa hase ahaatee Madaxweynaha dalka Turkiga ee martigelinaya shirka Recep Tayyip Erdogan uu ugu baaqay hogaamiyaasha caalamka inay muhiimada koowaad siiyaan dagaalka lagula jiro ururka Daacish isagoo sheegay in weerarka lagu qaaday Paris uu cadeyn u yahay in waqtigii hadalka uu dhamaaday.
Erdogan ayaa yiri : “Waxaa na wajahaya argagaxiso isku xiran caalamka oo idil. Sida aad ogtihiina argagaxisada ma taqaan diin,jinsi iyo dalba”. Madaxweynaha Maraykanka Obama ayaa xaqiijiyay in dowladiisu ay taageersan tahay dalka Faransiiska isagoo xusay in ay garab taagan yihiin ayna ka qeybgalayaan sidii loo soo qaban lahaa dadkii ka dambeeyay dambiga cadaaladana loo horkeeni lahaa.
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa ka baaqday kulankan isagoo soo direy wasiirka Arrimaha Dibadda Laurent Fabius inuu wakiil ka noqdo. Maraykanka ayaa rajo ka qaba in Faransiiska uu aargoosi sameeyn doono isagoo door weyn ka qaadan doono isbahaysiga la dagaalama ururka ISIL.
Obama ayaa sidoo kale waxa uu raadinayaa in uu ku qasbo wadamada kale ee reer Yurub iyo Bariga Dhexe inay tallaabo muhiim ah ka qaataan IS ayna xoojiyaan ka qeybgalkooda dhinaca milatariga, sida uu sheegay sarkaal u hadlay Maraykanka kahor inta uusan madaxweyne Obama u kicitimin safar sagaal maalmood qaadanaya oo wadamo ka tirsan caalamka uu ku mari doono.
Shirka ka dhacaya magaalada xeebta ku taal dalka Turkiga Antalya ayaa waxa uu isugu keenay hogaamiyaasha dunida inta ugu quwada weyn leh iyadoo illaa 500km oo kaliya ay u jirto magaalada Antalya dalka Siiriya oo dagaalo ka socday muddo afar sano iyo bar ah uu ka soo baxay ururka ISIL kaasoo halis ku ah ammaanka caalamka iyo qulqulka qaxootigii ugu badnaa caalamka muddo sanado badan kadib.